DOWLADDA ITOOBIYA oo ku qasbaysa Musharixiinta la tartamaysa Xasan Sheekh Maxamud in ay doorashada isaga haraan | Wardoon Wardoon.net - Somali News
DOWLADDA ITOOBIYA oo ku qasbaysa Musharixiinta la tartamaysa Xasan Sheekh Maxamud in ay doorashada isaga haraan
Dowladda Adis ababa oo saameynta badan ku leh arrimaha soomaaliya ayaa doonaysa in si qasab ah mar kale lagu soo doorto Madaxweynaha xilligan Xasan Sheekh Maxamud iyadoo culeys iyo cadaadis isugu dartay Musharixiinta la tartamaysa Madaxweyne Xasan Sheekh.
Koofur Galbeed Shariif Xasan, C/raxmaan C/shakuur Warsame oo saddexdooda ah Musharaxiin ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa, halkaasoo labo maalin ka hor ay gaareen.
Shariif Xasan ayaa inta uusan tagin Addis Ababa soo maray Uganda, balse Cumar C/rashiid iyo C/raxmaan C/shakuur ayaa kaga horeeyay Addis Ababa.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas uu sii maray Addis Ababa, ayna is arkeen xubnahan Musharaxiinta ee Addis Ababa ku sugan.
Saddexdan Musharax oo lagu eedeeyo inay ku lug lahaayeen Heshiiskii muranka dhaliyay ee Badda Soomaaliya ayaa hormuud u ah Isbaheysiga Musharaxiinta oo ay aas aastay Imaaraadka Carabta, waxaana todobaadyo ka hor kulan gaar ahaa ku yeesheen magaalada Nairobi.
Kulamada ka socda Addis Ababa ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka iyo Musharaxa ay wadato Imaaraadka Carabta.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa Warbaahinta Wardoon.net usheegay in Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta ay ku kala aragti duwan yihiin cida noqoneysa Madaxweynaha soo socda, taas ayaana keentay in Itoobiya ku baraarugto dhaq dhaqaaqa xoogga leh ee ay wadato Imaaraadka Carabta.
Imaaraadka Carabta ayaa si aan horay loo arag u lug yeeshay siyaasada Soomaaliya, si ay meesha uga saaraan Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxay xusheen Musharaxiin dhowr ah oo loolan la geli kara Xasan Sheekh, waxaana Musharaxiintaas ugu horeeya Cumar C/rashiid.
Dowladaha deriska ah sida Itoobiya iyo Uganda ayaa la dhacsaneyn doorka Imaaraadka Carabta iyo taageerida Musharaxiinta uu ka mid yahay Cumar C/rashiid, waana tan keentay in Addis Ababa ay goor dambe ku baraarugto dhaq dhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socday Dubai iyo Nairobi.
Itoobiya oo 20-kii sano ee u dambeysay saameyn ku leedahay siyaasada Soomaaliya ayaa dooneysa in looga dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo cida ay u aragto inay ka shaqeynayaan masaaliixdeeda ee hoggaanka dalka qaban kara.